Mai Chibwe VekwaZimuto: Ndiani anotanga nyaya yeRhoji mumba
Anofanira kutanga nyaya yerhoji ndiani mumba? Nyaya yekuti ndiani anofanira kutanga nyaya mumba inoshungurudza vakawana . Isu takakura tichiudzwa kuti:
Murume ndiye anonyenga musikana.
Murume ndiye anoroora musikana
Murume ndiye anokwira musikana
Murume ndiye anoisa musikana mimba
Zvoita sokuti tinongomirira kuti murume aite zvaanoda patiri isu tichingoita zvavanoda tichiita sokuti hapanawo chatinoda. Ukazonyatsotarisa unoona kuti izvi zvakaitigwa kupa murume, anova ndiye mukuru mumba, konifidhenzi yokutonga musha wake. Anopiwa simba roushe mumba make, iniwo mukadzi ndobvuma kuti ndiye she wemba, toenderera mberi takadaro.
Ukaongorora kuti nyaya dzokunyengana dziri papi unoona kuti musikana kana akaona mukomana waanoda anowana mukana wekumuudza kuti ari kuda kunyengwa naye. Mukomana anozosara onyenga musikana atoziva kare kuti arikuda kuti amunyenge uye agadzira nyaya kuti ifambe saizvozvo. Saka ipapo tinoti anyenga umwe ndiani? Musikana ndiye anyenga asi mukomana anofanira kutanga kutaura mashoko okunyenga pauviri hwavo. Kuitira kuti mukomana agohi ndiye she wekunyenga.
Totarisazve pakuroorana. Murume ukangomusiya akadaro haambofungi zvekuroora kusvika atanga kufoyiwa nevabereki kuti akura saka ngaachifunga zvokuroora. Zvikuru kana ane musikana anogaromuvhurira makumbo achiwana zvinhu, anobva atofara noupenyu hwekuita bhachura asinei nokutaura yokuroorana. Musikana ndiye anotozotanga kuudza mukomana nyaya dzokuroorana. Anotanga kutaura nezvichaitika pamakore akawanda ari mberi. Anokwanisa kubvunza mibvunzo inonetsa kupindura sokuti:
“Mwana wedu wedangwe tingamupa zita rokuti ani? “
“ Kana ndikaita mimba ne accident tinoita sei nazvo?”
“Mukoma wako akaroora ava nemakore mangani? “
“Ndikapedza university gore rinouya, ndikawana basa, unofunga kuti chii chikuru chichatevera?”
“Ndakuudza here kuti shamwari yangu Rosie ari kuroogwa vhiki ino. Ndiye wekupedzisira pashamwari dzangu dzese uye mudiki pandiri nemakore maviri.”
“Ko tinganoona here tete vangu kuti vakuone semukomana wangu?”
Mibvunzo yakadai ndeyokutanga nyaya yokuroorana. Mukomana ukasamutangira nyaya yacho haana basa nayo. Anongoda kuramba muri mukomana nomusikana. Chinonetsa ndechokuti munosvika pachinhanho chokuti magarisa makadaro. Ipapo kana muchimbobatana batana kana kuti muchimbotarirana mumaziso unosvika pokuti zemo rinokwira mese muchida kuvatana asi iwe musikana usina SECURITY pazviri. Unenge usingazivi kuti kana ndikabviswa umhandara zvinozofamba sei mberi uko kana tikarambana . Musikana anenge atoziva kare kuti uyu ndiye munhu achaita murume wake. Murume anenge asina kuzvifunga saka anoda kufungiswa. Kana nyaya yangotanga murume anopedzisira akumbira musikana kuita mukadzi wake. Zvoreva kuti musikana ndiye atanga nyaya asi mukomana ndiye anotaura mashoko.
Ukanyengwa nomukomana mukadanana mukaita makore maviri kana matatu ukarambwa, zvoreva kuti hamuna kuenda mberi. Ukasarambwa, mukaroorana, uchada kurhojewa.
Mava mumba menyu, kazhinji murumre ndiye anotaura mashoko asi mukadzi ndiye anotanga nyaya nechibhende. Ukahwa mukadzi achikubvunza mubvunzo muri mumubhedha wava kuda kuvata, terera uhwe kuti ane hope here kana kuti akasvinura. Kana asina hope ari kukubvunzira kuti usabatwa nehope pasina chaitika. Pane zvaari kuda asi ari kukupa chanzi chokutaura mashoko kana kungotanga kumubatabata. Terera kune nyaya.
“Waswera uchiiteiko kuneta kudai?” mubvunzo mukuru iwoyo? Kozotizve maitire ake mumubhedha imomo. Isu vakadzi tine chipo che BODY LANGUAGE.
Ndinokwanisa kusadzima rambhi rokudivi kwangu kwemubhedha. Zvoreva kuti imbomira kuvata pane zvandiri kuda.
Ndokwanisa kuramba ndichiita nyaya kuti usabatwa nehope.
Ndokwanisazve kuvata makumbo achionekwa kuti akatarangana kureva kuti ndakatomirira.
Ndokwanisa kungozvikwenya pamberi uku ndichiita nyaya. Ndiri kuti ita TAKE OVER zvinhu zvifambe.
Ndokwanisa kukuudza kuti handina hope. Iwewo chifunga kuti munhu asina hope avingei kuzovata. Chiziva kuti pane zvaanoda.
Inyaya yokuti takadzidziswa kumirira varume vedu. Murume ndiye anotaura mashoko ini mukadzi ndopa SERVICE. Takajaira kukumbigwa zvinhu tichingomirira kupa chinhu chakumbigwa.
Ndipewo mvura yokumwa
Ndipewo hembhe dzokupfeka
Ndipewo chokuti nechokuti, ini ndosimuka ndomupa. Asi pese apa anokumbira iye anogona kuzviitira zvese zvinhu izvi. Kungoti anoziva kuti mukadzi wake anofarira kumuitira. Parhoji ndiyo Psychology yatinayo isu vakadzi. Ndinomirira murume kukumbira kana kungotanga kundibatabata ini ndotevedzera zvaanoda asi ini ndagara ndichitozvidawo. We are bred for Service to our families and our husbands and we are psychologically pre-disposed to serving.
Tine imwe nyaya yokuti tinoona sokuti murume anofarira kundirhoja anondida uye anoda muviri wangu. Ukasagaroona murume wako achikutarisa tarisa achimbogarisa maziso ake pamagaro, chiuno, kana mazamu ako unohwa moyo kunyevenuka nokufara. Kuzohi bvisa bhurugwa woiswa ruoko pamberi womwiwa minyatso wonanzwa guvhu, wotambwa newe wopedzisira wafongoreswa wapinzwa chombo, worhojewa kusvika wapiwa urume hwakawanda, unohwa kudiwa kwakakura chose.
Saka nyaya yokuti murume atange inotoratidzazve kuti anondida. Zvinoreva kuti ndichamirira kusvika atanga. Murume akangohwisisa ipapa panyaya yokuti tinomirira, anoita murume kwaye chaiye. Murume ndiye mukuru mumba saka ndinomirira kuita kuda kwake.
Iye murume ndiye anozoti kana akachenjera anovambusa mukadzi wake bhiriji iroro. Anomukurudzira kuti kana ada zvinhu akasire kutaura murume obva atoziva kuti ari kuda pane kungomirira kuti murume ataure. Kune vazhinji vedu vakabva ipapo, vakapiwa simba rokutangana nazvo asi unongoona kuti tinofara kana murume akatanga kutaura. Ini ndokwanisawo kutanga asi kazhinji matangire acho ndeechibhende futi . unokwanisa kuudza murume nechibhende kuti uri kuda rhoji manje manje.
Toti makasira kugeza mukadzokera kunoona TV. Unohwa mukadzi oti
“Ndave kunofanodziisa mubhedha, usanonoka kuuya.”
“Hendei tinovata unokasira kumuka mangwana.”
“Pedzisa zvauri kuita izvozvo unowana ndakakumirira.”
“Ukawana ndabatwa nehope ndimutse.”
“Kwatonhora uku. Hendei tinodziisana mumachira. “
“Ndaisa mvura mubhavhu. Chienda unogeza ndouya manje manje ndozokugezesa musana.”
“Vhiki ino tiri kuita zvemimba. Usazokangamwa.”
“Ko tongovata here ?”
Kutaura feya feya kuti ndoda rhoji, tinotaura hedu asi kazhinji tinotaura nechibhende. Varume ndimi munogona kutaura pese pese kungoti “vhura .” zvine authority yokuti iniwo ndikangozvihwa handinonoki kuzviita. Murume anokutarisa mumaziso agokuudza kuti fongora. Haumboiti nharo, Unongobva pamanhede ako wotofongora iye opinza motoita. Kupiwa COMMAND nomurume zvinoitisa zemo kukura futi. Unotohwa hwi rake kuti ari kuda panhu pangu saka ndewangu uyu.
Asi chinhu chakanaka kumboti muchitamba henyu wonyebera kurambira murume. Mombokwikwiridzana kusvika wanyebera kuti ndiye ane simba okubata okutsimbirira okupinza. Unoita zemo guru nokuda kwesimba romurume.
Ngatidzidze kutaurira varume vedu kana tichida rhoji kwete kungomirira pese pese. Murume ndewako ane zvaunoda muudze akupe. Taura wakasununguka. Imiwo varume tikurudzirei titaure zvatinodawo. kurudzira mukadzi wako kutaura nyaya dzese pachena kana muri vaviri. Bvunza mibvunzo inoda mhinduro dzakadzama. Nyarara kana achipindura urege apedze, wobva wabvunza umwe mubvunzo.
Kana pane maitire anondinakira rega ndiataure. Usangondiudza zvokuita pese pese. Umbobvunzawo mukadzi wako kuti nhasi unodei womirira kusvika ndataura zvandinoda. Bvunza kuti chinonaka pazviri chii uhwisise kuti kana oda kudaro futi ubve waziva kuti ndiyo Favourite yake iyoyo.
Mamwe mazuva mukasachenjera umwe musi munokwanisa kuti uyu akamirira uyu akamirira kusvika pashaya chaitwa mese manga muchida. Kana zvichikunetsai munokwanisa kuti pavhiki moti uyu mazuva ake uyu ake. Toti mukadzi opiwa Muvhuro, Chitatu, Chishanu, murume otorawo mazuva asara. Mobva mabvumirana kuti kana uri musi wako ndiwe uchatungamira pakuita zvese, nguva yokuita, kutanga nyaya, maitire acho, zvese. Munokwanisa kudaro kusvika mese mava kukwanisa kutaurirana panyaya dzese pasina zvokusvoda.
Mukadzi ane KONIFIDHENZI mukadzi ane FREEDOM OF EXPRESSION pachikapa nepakutamba nechombo chemurume wake, saka iwewo murume uchanakigwa.
Mukadziwo ziva kuti kutaridza konifidhenzi hazvirevi kuti haucharemekedzi murume. Murume wako murume wako ndiye mukuru mumba. Ndiwo mutemo wedu isu vatema uye ndiwo mutemo weBhaibheri kune avo vanoriverenga vari vatendi. Asi kuva mudiki hazvirevi kuti hauna muromo. Iye murume wako anofarawo kana uchimuudza zvokuita.
Murumewo dzidza kuti umwe musi unoita zvokukumbira mukadzi, wombodembademba kana achiramba, womuudzawo zvinoitika kana ukavata usina zvawapiwa. Kana akati akaneta iwe womuudzawo kuti ngaasaita chinhu, kungovhura chete wogumira ipapo iwe womushanda wega. Kana azobvuma, kasira kupinda wobva wazomutenda wava mukati, chirondedzera kunaka kwazviri kuita kuti awanewo hwisiso yokuti sei abvuma. Mukadzi anokwanisa kungovhira murume opinza zvotopera zvakadaro.
Mapedza, ratidza rudo, wombundikirawo mukadzi wako womuti chivata hako. Mukadzi avate achiziva kuti aita DECISION yakanaka kumurume wake. Musi waanodawo iwe wakaneta, muudze kuti akakwanisa kumutsa chombo ngaakwire aite basa iwe unchishandhwa kusvika wadiridzira. Mukadzi anohwisisa chombo chomurume anoziva kuchimutsa nokuchipa hasha kusvika chakwansa basa.
ndiani anotanga bonde mumba
kutanga bonde mumba
mukadzi kutanga bonde
murume kutanga bonde
Kumirira murume kuti atange
Posted by Mai E Chibwe at 03:34